Kedụ ka I Ga-esi Tụta Mmetụta Algọridim Nchọgharị Mobile? | Martech Zone
Anyị gwa banyere nzọụkwụ dị mkpa iji zere ọnwụ dị egwu nke ọchụchọ ọchụchọ site na mkpanaka ọchụchọ na Google na-abịa otu izu site ugbu a. Ndị enyi anyị na gShift nọ na-elele mgbanwe ndị ahụ anya ma bipụtara nke ukwuu ihe omimi banyere mmetụta a tụrụ anya ya nke mgbanwe algorithm.
Iji chọpụta mmetụta nke ndị na-ere ahịa ma chịkọta echiche banyere mgbanwe a dị mkpa, gShift mere nyocha nke ihe karịrị ndị na-ere ahịa dijitalụ 275 n'ofe ọrụ dịgasị iche iche gụnyere ụlọ ahịa, njem na ụgbọ ala. Anyị mere nyocha a n'etiti Machị 25 - Eprel 2 na ihe karịrị pasent 65 nke ndị sonyere bụ ndị na-eme mkpebi ndị okenye dị elu nwere isi sitere na Director na CMO. Nzaghachi anyị natara gosipụtara ụfọdụ echiche na-atọ ụtọ banyere otu ndị ọkachamara ụlọ ọrụ si akwadebe maka mgbanwe Eprel 21st.
N'ụzọ na-akpali mmasị, ihe karịrị ọkara nke ndị ahịa dijitalụ niile kwere na mmetụta ga-ọkpụrụkpụ… ma ihe worrisome bụ na ndị dijitalụ ahịa n'ezie enweghị ụzọ nke na-ekiri mmetụta. gShift web ọnụnọ software Monitors gị na saịtị ahụ ogo na mobile ọchụchọ.
I nwekwara ike ịkwadebe ụlọ ọrụ gị maka Google Eprel 21st mobile SEO algorithm mgbanwe na ahaziri gShift Mobile SEO Benchmark akụkọ nke otu ntanetị weebụ gị si arụ ọrụ ugbu a na desktọọpụ vs. mobile. Hụkwa na ị ga-enweta ngosipụta nke ikpo okwu ha - ọ mara mma!
Tags: April 21google mobile searchgoogle mobile search algọridimgshiftmobile ogomkpanaka ọchụchọmkpanaka seo
Kụrụ Ndị Na-akpọ Gị Ọkụ? Ikekwe Ọ bụ Yourhụnanya Ndị hụrụ Gị n'anya!